Aogositra 16, 2018 Admin
Pantera Capital manangana $ 71M ho an'ny tahirim-bola crypto barotra
Blockchain orinasa fampiasam-bola Pantera Renivohitra no nanomboka ny fahatelo crypto tahirim-bola maherin'ny $71 tapitrisa efa nanao. An SEC famenoana manondro ny fampiasam-bola vaovao, rafitra, antsoina hoe Venture Fund III, Nanomboka ny fanatitra voalohany tamin'ny 31 Jolay, ary efa nanangana $71.44 tapitrisa avy 90 mpamatsy vola.
Pantera koa dia nanoratra tao amin'ny lahatsoratra bilaogy tamin'ny Alarobia fa Venture Fund III dia efa nanao ny voalohany blockchain Bet, mampiasa vola any Bakkt - ny sehatra ara-barotra cryptocurrency nanomboka tany am-boalohany volana ity ny ICE, ray aman-dreny fiangonana, dia ny New York Stock Exchange. Pantera mafy ao ny fampiasam-bola 10,000 hiverina isan-jato nandritra ny dimy taona farany avy amin'ny tsatòka samihafa cryptocurrency tetikasa. Pantera no vola ao amin'ny crypto fifanakalozana toy ny Bitstamp, Korbit sy Shapeshift, ary koa ny fandoavam-bola startups toa Circle.
Korea Atsimo teti-bola $ 880M ny teknolojia ao anatin'izany ny blockchain
Kim Dong-yeon, Korea Atsimo ny Minisitry ny Vola, dia nanambara fa ny governemanta manokana $4.4 lavitrisa nandritra ny taona atsy ho atsy ho fandaharana fampiasam-bola izay mifantoka amin'ny blockchain ary sivy hafa hihamaro be ny teknolojia sehatra. manokana, Korea Atsimo vola ny governemanta $880 tapitrisa taona manaraka, mba hampitombo ny fampandrosoana ny teknolojia ao anatin'izany zava-baovao blockchain.
Data nampahafantatra tao amin'ny vohikalan'ny Ministeran'ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola dia mampiseho fa ny governemanta no napetraka mba zarao 1 tapitrisa tapitrisa Won, na ny $880 tapitrisa in 2019 - ny 80 isan-jato izany raha oharina amin'ny fitomboana ao 2018 - ny vola amin'ny teknolojia anisan'izany blockchain, lehibe tahirin-kevitra sy AI. koa, Hoy ny fahefana dia vola mitontaly $8 – 9 lavitrisa ao amin'ny faritra ao amin'ny dimy taona ho avy. Ny tanjona dia ny “hifantoka amin'ny fampiroboroboana ny lehibe tahirin-kevitra sy AI, blockchain fampivelarana ny teknolojia mba hahazoana antoka ny fiarovana sy ny fitantanana ny tahirin-kevitra boosting hizara toe-karena.”
Cryptocurrency fifanakalozana ZB mikasa hifindra ho any Malta
ZB.com, izao tontolo izao lehibe indrindra ny fith-cryptocurrency fifanakalozana amin'ny alalan'ny boky ara-barotra isan'andro, ny fametrahana tsena eo amin'ny talaky masoandro Blockchain Island ny Malta. ZB.com fomba ofisialy ho fametrahana ny hetsika eoropeanina ny fandefasana ny vaovao any Malta fifanakalozana. Ity farany ireo fanambarana manaraka avy Binance, OKEx sy DQR, izay nanokatra ihany koa ny birao tao amin'ny nosy.
Ny orinasa voalohany dia hanomboka avy toy ny crypto-to-crypto fifanakalozana ary hijery amin'ny farany mba hanolotra Fiat-to-crypto tsiroaroa varotra amin'ny alalan'ny sehatra vaovao miorina avy amin'ny Eoropeana nosy. Mpiara-manorina Zhao Jimmy hoe: "Malta dia angamba izao tontolo izao indrindra miandalana ho miankandrefana-misaina firenena in DLT, crypto sy ny fintech, ary isika no tena faly handray anjara amin'ny Blockchain Island. Matoky isika dia ho afaka hanambara ny asa tsy ho ela velona.”
Tselatra Labs miteraka "watc...
Previous Post:Blockchain News 15.08.2018
Next Post:Blockchain News 17.08.2018